Kooxda Arsenal oo bilowday ololaha ay lambarrada kaga bedelayso qaar ka mid ah xiddigaheeda & Goolhaye Bernd Leno oo lambar cusub loo xiray – Gool FM
(London) 01 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ee dalka Ingiriiska ayaa bilowday ololaha ay lambarrada kaga bedelayso qaar ka mid ah xiddigaheeda xilli ciyaareedka cusub, iyadoo goolhaye Bernd Leno ay durba lambar cusub u xirtay.
Goolhaye Bernd Leno ayaa kooxda Arsenal u xiran doono lambarka 1-aad ee naadiga xilli ciyaareedka cusub ee 2019/20.
Bernd Leno ayaa qaatay lambarka koowaad ee naadiga Gunners, kaasoo uu kooxda Arsenal u xiran jiray goolhaye Petr Cech.
In Goolhaye Bernd Leno uu xiran doono lambarka 1-aad ee Arsenal xilli ciyaareedka cusub, waxaa lagu xaqiijiyey dukaanka Online-ka kooxda ee dhinaca Website-ka.
Waxa ay u badan tahay in xagaagan ay lambarrada ka bedeli doonto Gunners qaar ka mid ah xiddigaheeda, waxaana ay u badan tahay in lambarada laga bedelo doono Reiss Nelson oo hadda qaata (61), Eddie Nketiah (49) iyo Joe Willock oo xirta lambarka 59-aad.
Emi Martinez oo hadda xirta lambarka 26-aad ayaa qaadan kara lambarkii uu iminka iska dhigay Leno ee 19-aad ama lambarka kale ee 13-aad, laakiin waxa ay u badan tahay oo la qiyaasayaa inay sugi doonaan inay xaqiijinayaan inay goolhaye David Ospina ka soo qaateen kooxda Napoli.
Lambarrada saddexaad, siddeedaad iyo 12-aad ayaa haatan diyaar ah oo la heli karaa, waxaana ay Arsenal siin kartaa qaar ka mid ah xiddigaha haatan ku sugan kooxda ama saxiixyada cusub ee ay sameyn doonto suuqa xagaagan.